UK စာမေးပွဲသတင်းများ ( နိုဝင်ဘာလ၂ဝ၁၄ ) - Myanmar Network
UK စာမေးပွဲသတင်းများ ( နိုဝင်ဘာလ၂ဝ၁၄ )
Posted by British Council Customer Service on November 3, 2014 at 14:55 in UK Exams ( စာမေးပွဲများအကြောင်း )
LCCI January On-Demand Exam Registration
၂ဝ၁၅ ဇန်နဝါရီလတွင် LCCI January On-Demand စာမေးပွဲအားကျင်းပမည်ဖြစ်သောကြောင့် private candidates (တစ်ဦးချင်းငွေသွင်းလိုသောကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများသည်) စာမေးပွဲကြေး အား ဒီဇင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့ မှ (၄) ရက်နေ့ အတွင်း ဗြိတိသျှကောင်စီ မြေညီထပ်ရှိ Customer Service & Sales Department တွင် တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ နံနက် (၈:၃ဝ) မှ ညနေ(၃:ဝဝ) အတွင်း မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့်တကွလာရောက်ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
စာမေးပွဲကြေးများ- Level 1 - USD 34 , Level2- USD 39 , Level3- USD 44
၂ဝ၁၄ ဒီဇင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပမည့် KET /PET စာမေးပွဲ၏ စာမေးပွဲ အချိန်ဇယားများကို ဗြိတိသျှကောင်စီ မြေညီထပ်ရှိ Customer Service & Sales Department တွင် တနင်္လာနေ့ မှ စနေနေ့ အထိ နံနက် (၈:၃ဝ) မှ (၆:ဝဝ) အတွင်း မှတ်ပုံတင်မူရင်း၊ ငွေသွင်းထားသော ဖြတ်ပိုင်း နှင့်တကွ ကိုယ်တိုင် လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက် - ကျောင်းမှ တစ်ဆင့် စာမေးပွဲကြေးသွင်းထားသော ကျောင်းသား| ကျောင်းသူများ သက်ဆိုင်ရာကျောင်းသို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Young Leaners Exams (YLE) Certificate Announcement
၂ဝ၁၄ အောက်တိုဘာလ (၁၄) ရက်နေ့တွင် တွင် ဖြေဆိုထားသော Young Leaners Exams (YLE) စာမေးပွဲများ၏ စာမေးပွဲအောင်လက်မှတ်များကို ၂ဝ၁၄ နိုဝင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့ မှစ၍ ဗြိတိသျှကောင်စီ မြေညီထပ်ရှိ Customer Service & Sales Department တွင် တနင်္လာနေ့မှ စနေနေ့မနက် (၈း၃ဝ) မှ ညနေ (၆:ဝဝ) အတွင်း စာမေးပွဲအချိန်ဇယား၊ မှတ်ပုံတင် မူရင်း၊ ငွေသွင်းထားသောဖြတ်ပိုင်း နှင့် တကွ လာရောက် ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
LCCI Combined Diploma/ Group Diploma
၂ဝ၁၄ နိုဝင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့ မှ (၂၁) ရက် နေ့ အထိ LCCI Combined Diploma များနှင့် LCCI Group Diploma များအတွက် Diploma ပြန်ပေါင်းလျှောက်ထားခြင်းများကို လက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် နံနက် (၈:၃ဝ) မှ
(၃:ဝဝ) အတွင်း မှတ်ပုံတင်မူရင်း ၊ သက်ဆိုင်ရာ certificate မူရင်း၊ မိတ္တူ (သို့မဟုတ်) Result Slip မူရင်း၊မိတ္တူ နှင့်တကွ လာရောက်ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ Diploma ပြန်ပေါင်းလျှောက်ရန် အတွက် USD ၂၇ ပေးသွင်းရပါမည်။
LCCI Certificate နှင့် Diploma လက်မှတ်များ ပျောက်ဆုံးပျက်စီးခြင်း ၊ LCCI Certificate နှင့် Diploma လက်မှတ်များ အမှားပြင်ဆင်ခြင်း အတွက် ပြန်လည်လျှောက်ထားလိုပါက Certificate/Diploma မိတ္တူ ၊ Result Slip မိတ္တူ နှင့်တကွ ၂ဝ၁၄ နိုဝင်ဘာလ(၁၈) ရက်နေ့ မှ (၂၁)ရက်နေ့ အထိ နံနက် (၈:၃ဝ) မှ (၃:ဝဝ) အတွင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ လက်မှတ်များ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန အတွက် USD ၂၁ ပေးသွင်းရပါမည်။
NUS (ISS) Aptitude Exam Registration
၂ဝ၁၄ နိုဝင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့တွင် NUS (ISS) Aptitude စာမေးပွဲကို Myanmar Info-Teach, အခန်း (၁၀၂) ၊
မနက် ၀၉း၃၀ တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် စာမေးပွဲကြေးများကို စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့် ရက်မတိုင်ခင် အတွင်း တနင်္လာ
မှ သောကြာနေ့ နံနက် (၈း၃ဝ) မှ နေ့လည် (၃းဝဝ) အတွင်း ဗြိတိသျှကောင်စီ မြေညီထပ်ရှိ Customer Service &
Sales Department တွင်မှတ်ပုံတင် မူရင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ Registration Form နှင့် တကွ စာမေးပွဲကြေး USD
25 ဖြင့် လာရောက် ပေးသွင်း နိုင်ပါပြီ။
CIMA Computer-based ( CBA ) Exam Registration
၂ဝ၁၄ နိုဝင်ဘာလတွင် CIMA Computer-based (CBA) စာမေးပွဲများကိုကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် စာမေးပွဲကြေးများကို ၂ဝ၁၄ နိုဝင်ဘာလ (၇) မှ (၁၃) ရက် နေ့ အတွင်း တနင်္လာ မှ သောကြာနေ့ နံနက် (၈း၃ဝ) မှ နေ့လည် (၃းဝဝ) အထိ ဗြိတိသျှကောင်စီ မြေညီထပ်ရှိ Customer Service & Sales Department တွင်မှတ်ပုံတင် မူရင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ Registration Form နှင့် တကွ စာမေးပွဲကြေး များကို လာရောက် ပေးသွင်း နိုင်ပါပြီ။
၂ဝ၁၄ နိုဝင်ဘာလတွင် ACCA CBE စာမေးပွဲများကို ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် စာမေးပွဲကြေးများကို ၂ဝ၁၄ နိုဝင်ဘာလ
(၁၀) ရက်နေ့ မှစ၍ (၁၄) ရက်နေ့အထိ၊ တနင်္လာ မှ သောကြာနေ့ နံနက် (၈း၃ဝ) မှ နေ့လည် (၃းဝဝ) အတွင်း
ဗြိတိသျှကောင်စီ မြေညီထပ်ရှိ Customer Service & Sales Department တွင်မှတ်ပုံတင် မူရင်းနှင့် တကွ
လာရောက် ပေးသွင်း နိုင်ပါပြီ။
စာမေးပွဲကျင်းပမည့်ကာလ - နိုဝင်ဘာလ (၂၄) ရက်နေ့ မှ (၂၆) ရက်အတွင်း
CIMA Exam Registration
၂ဝ၁၄ နိုဝင်ဘာလတွင် CIMA စာမေးပွဲများကို ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် စာမေးပွဲကြေးများကို ၂ဝ၁၄ နိုဝင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့ မှစ၍ (၁၃) ရက်နေ့အထိ၊ တနင်္လာ မှ သောကြာနေ့ နံနက် (၈း၃ဝ) မှ နေ့လည် (၃းဝဝ) အတွင်း ဗြိတိသျှကောင်စီ မြေညီထပ်ရှိ Customer Service & Sales Department တွင်မှတ်ပုံတင် မူရင်းနှင့် တကွ လာရောက် ပေးသွင်း နိုင်ပါပြီ။
စာမေးပွဲကျင်းပမည့်ကာလ - နိုဝင်ဘာလ အတွင်း
၂ဝ၁၄ နိုဝင်ဘာလတွင် LCCI Computerised Accounting ( Auto Count ) စာမေးပွဲများ ကျင်းပမည်ဖြစ်သောကြောင့် စာမေးပွဲကြေးအား နိုဝင်ဘာလ (၃) ရက်နေ့မှ (၁ဝ) ရက်နေ့အထိ၊ တနင်္လာ မှ သောကြာနေ့ နံနက် (၈း၃ဝ) မှ နေ့လည် (၃းဝဝ) အတွင်း ဗြိတိသျှကောင်စီ မြေညီထပ်ရှိ Customer Service & Sales Department တွင်မှတ်ပုံတင် မူရင်းနှင့် တကွ လာရောက် ပေးသွင်း နိုင်ပါသည်။
LCCI November Series (Series 4-2014) Timetable Slip Announcement
၂ဝ၁၄ နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပမည့် LCCI Series4စာမေးပွဲ အချိန်ဇယားများကို နိုဝင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့ မှ စ၍ ဗြိတိသျှကောင်စီ မြေညီထပ်ရှိ Customer Service & Sales Department တွင် တနင်္လာနေ့ မှ စနေနေ့ အထိ နံနက် (၈:၃ဝ) မှ (၆:ဝဝ) အတွင်း မှတ်ပုံတင်မူရင်း၊ ငွေသွင်းထားသော ဖြတ်ပိုင်း နှင့်တကွ ကိုယ်တိုင် လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါပြီ။
Permalink Reply by Lwin Lwin Thu on November 7, 2014 at 9:32
LCCI combined Diploma ကိုလျောက်ချင်ပါတယ်.. Series22002 မှာ Accounting & Business Statistics ( Level III) နဲ့ Series42002 မှာ Management Accounting ( Level III ) အောင်ထားပါတယ်
အဲဒါ လျောက်လို့၇မ၇ သိချင်လို့ ဖြေပေးစေချင်ပါတယ်... ကျေးဇူးပါ...
Permalink Reply by British Council Customer Service on November 13, 2014 at 12:23
အစ်မရေ၊ ဖြေပြီး ၂ နှစ် အတွင်းဘဲ Combined Diploma လျှောက်လို့ရပါတယ်ရှင့်။
Permalink Reply by Kaung Htet Thwin on December 8, 2014 at 16:17
ှSeries42012 ရယ် 2013 on demand တွေရယ်တွဲပြီး Combined Diploma လျှောက်လို့ရသေးလားမသိဘူး
Permalink Reply by Ko Zaw on January 10, 2015 at 20:43
LCCI-3 January On-Demand Exam Date?? Please...
Permalink Reply by British Council Customer Service on January 22, 2015 at 15:22
Hi Ko Zaw, The Jan OD exam dates are from 26 to 30 January. Please come and collect the exam docket within 08:30 ~ 16:30 on Mondays ~ Sundays. You are required to bring along your original NRC and the receipt. If you registered via the training centre, please contact the centre first.
Permalink Reply by Ko Zaw on January 22, 2015 at 17:29
Well noted with thank you...
Permalink Reply by Ko Zaw on March 16, 2015 at 21:11
LCCI-3 အတွက် Jan'2015 OD စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း ထွက်နေပြီလား... ဘယ်တော့ သိနိုင်မလဲ ခင်ဗျာ...
Permalink Reply by British Council Customer Service on April 1, 2015 at 13:02
Hi Ko Zaw, LCCI Level3Jan 2015 OD စာမေးပွဲ result များမထွက်သေးပါဘူး။ ဧပြီလ ၂၁ ရက်တွင် ပြန်စုံစမ်းပေးပါ။